La kulan Kooxda Shaqada - Transportation | seattle.gov
Xubnaha Kooxda Shaqada ee Hadda
Yordanos Teferi, la gudoomiyaha Kooxda Shaqada
Yordanos Teferi waa qareen eDiscovery leh in ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo ah shirkad sharci oo la isku daray iyo Fortune 100 shirkadood. Markii Yordanos bilowday in ay ka mid ahaato guddiga Xarunta Jaaliyadda Ereteriya, waxaa loo xilsaaray shaqada weyn ee Isbahaysiga bulshada Dhaqamada Kala Duwan ee ay hadda u tahay Agaasimaha Fulinta ee Ku Meel Gaarka ah. Yordanos waxa kale oo ay ka shaqeeyaa Guddiga La-talinta Initiative Development Initiative (EDI) iyo Bulshooyinka Fursadaha (COO) ee Guddiga Maamulka.
Yu Ann Youn, la Guddoomiyaha Kooxda Shaqada
Yu-Ann Youn waa ardayad hadda wax ka barata Jaamacadda Washington ee Xarunta Robinson ee Aqoonyahanada da'da yar waxay diyaarinaysaa shahaadadeeda Bachelorka ee Maamulka Dhismaha. Waxay aad u xiiseysaa dhisidda sinnaanta jinsiyaddaha iyo kala duwanaanshaha iyo dhisida bayo ku haboon waxayna u dooda ka qaybgalka ballaaran ee bulshada ee ku aaddan qorsheynta iyo horumarinta magaalada. Waxay ku biirtay Kooxda Shaqada ee Sinaanta Gaadiidka si ay u iftiimiso codadka bulshooyinka dakhliga yar ee BIPOC iyo dhalinyarada ka qaybgalaysa doodaha ku saabsan qorsheynta gaadiidka.
Rizwan Rizwi, la-guddoomiyaha Emeritus
Rizwan waa Madaxweynaha iyo Maamulaha Maareynta Kheyraadka SAR. Wuxuu ku dhashay kuna barbaaray Newcastle ee ku taal Tyne ee dalka Ingiriiska wuxuuna ka qalin jabiyay jaamacada Newcastle University isagoo shahaadoda BA da ku qaatay Maamulka Ganacsiga kadibna MA ku qaatay Maamulka Ganacsiga. Waxa uu khibrad dheer u leeyahay shirkadaha Maalgashiga waxana uu sanado badan maamulayay Portfolio Sinnaanta SMITH BARNEY Citigroup (hadda qayb ka ah Morgan Stanley)
Sannadkii 2012, Rizwan waxa uu noqday Agaasimaha Fulinta ee Adeegyada Guriyeynta Muslimiinta (MHS) halkaas oo 2018 ay ka caawiyeen in ay hoy helaan in ka badan 1,100 qof oo ku baahsan waaxda King, oo ay ugu horreeyaan qaxootiga iyo soogalootiga hoylaawayaasha ah. Waxa uu ku biiray Kooxda Sinaanta ee Waaxda Gaadiidka Seattle si uu u hubiyo in dadku ay ra'yi ku leeyihiin go'aamada Gaadiidka in kasta oo ay ka yimaadeen kooxo dhaqaale ahaan liidata ama taariikh ahaan aan la matali jirin kuwaas oo inta badan lagu illoobo qaabaynta siyaasadda.
Steven Sawyer, la-hogaamiyaha Emeritus
Bishop Steven R. Sawyer waa u doodaha xuquuqul insaanka, hogaamiye bulsho, ganacsade, iyo raadiyaha diinta qaranka wuxuu haystaa BA ee Maamulka Ganacsiga oo diirada saaraya Maareynta Ururka iyo sidoo kale Master of Divinity oo diirada saaraya Horumarinta Caalamiga ah iyo Cadaalada ee Jaamacadda Multnomah ku taala Portland, OR. Hadda, Steven waxa uu u shaqeeyaa sidii Agaasimaha Fulinta ee POCAAN, oo hore loogu yiqiin Dadka Midabka ka soo horjeeda Shabakadda AIDS-ka, oo ah hay'ad adeeg bulsho oo dhaqamo badan leh oo u adeegta bulshooyinka la haybsooco ee Seattle tan iyo 1987kii. Wakaaladu waxa ay doonaysaa in ay u doodo, wax barato, oo ay abaabusho barnaamijyo ka hadlaya xadgudubka mukhaadaraadka, xabsiyada, guri la'aanta, cudurrada galmada la isku qaadsiiyo, cunsuriyadda, jinsiga, nin jeclaysiga, iyo kala duwanaanshiyaha kale ee faquuqaya. Hal-ku-dheggiisu waxa uu la wadaagaa ururka: “Kobcinta Caafimaadka, Abaabulka Bulshada, iyo Wax ka beddelka Nolosha.
An Huynh waa Iskuduwaha Guud ee Goobta iyo Bulshada ee Seattle Chinatown International District Preserving and Development Authority (SCIDpda). Waxay fududaysaa ka-qaybgalka bulshada iyo wacyigelinta mashaariicda bannaan ee dadweynaha ee Degmada Caalamiga ah ee Chinatown iyada oo la macaamilaysa ganacsiyada maxalliga ah, dadweynaha, iyo milkiilayaasha hantida iyo sidoo kale waaxaha degmada, maalgeliyayaasha, iyo shirkadaha naqshadaynta si loo helo fikrado la isku raacsan yahay oo ku saabsan naqshadaynta farshaxanka dadweynaha ee kala duwan, naqshadaynta jardiinooyinka. iyo mashaariicda dib u soo noolaynta luuqyada. Waxa ay ku biirtay TEW si ay kor ugu qaado waayo-aragnimada dadka ku nool Chinatown International District halkaas oo 72% qoysasku ay ku hadlaan luqad aan Ingiriisi ahayn 19.1% waa dad waaweyn, labadaba inta badan waa laga tagay wadahadalka sinnaanta gaadiidka.
Cesar Garcia waxa uu ugu yeedhay aagga Seattle gurigiisa 17kii sano ee la soo dhaafay, halkaas oo uu uga shaqeeyo turjubaan Isbaanish ah iyo buundada xidhiidhka ee dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin caafimaadka, bulshada iyo sharciga. Waxa kale oo uu ahaa Xidhiidhiyaha Bulshada oo si madax banaan ugu shaqaynayay Waaxda Xaafadaha muddo ku dhaw 5 sano oo uu ka caawiyay nadiifinta wadooyinka xidhiidhka dawlada hoose iyo bulshada. waxuu leeyahay kumanaan khibrad nololeed ah oo saameysa soogalootiga iyo qaxootiga tasoo ku kaliftay inuu ku biiro xaaskiisa Peggy Hernandez aasaasida Lake City Collective, kaas oo u dooda oo wax ka qabta kaabayaasha iyo arrimaha nolosha ee inta badan saameeya qoysaska BIPOC ee ku yaal cirifka woqooyi ee Seattle. Isagoo ku noolaa Koonfurta, Bartamaha iyo Waqooyiga Seattle, Cesar wuxuu kula kulmay gacantiisa koowaad sinnaan la'aanta gaadiidka magaalada iyo maalgashiga kaabayaasha. Wuxuu ku biiray TEW si uu uga caawiyo jabinta noocaan dulmiga ah iyo hagaajinta amniga xaafadaha ay qoysasku jecel yihiin inay ku nool yihiin.
Ellany Kayce waa xubin ka tirsan qabiilka Tlingit Nation, Raven Clan. Iyadu waa Agaasimaha Fulinta ee Barnaamijka Dhaladka Nakani, 501c3 ee Seattle inta ay ku jirtay xirfadeeda waxa ay u shaqeysay sidii barre cadaalada jinsiyadeed iyo bulsho iyo barnaamij horumariye, lataliye dhaqameed, qorsheeye dhacdo, isuduwaha, fududeeyaha, tababaraha, horumarinta manhajka iyo lacag ururinta. Ellany waxa kale oo ay leedahay waayo aragnimada nolosha oo dhan la shaqaynta Dhaladka Alaska, Dhaladka Maraykanka ah, iyo bulshooyinka Qaramada koowaad, waana tababare, durbaan dhaqameed, heesaa, qoob ka ciyaar, iyo u dhaqdhaqaaqe. Waxay aaminsan tahay in helitaanka gaadiidku uu muhiim u yahay nolol maalmeedka, iyo in la'aanta sinnaanta iyo caddaaladda bulshada ee gaadiidka ay si aan xad lahayn u saamayso kuwa ay la kulmaan hoy la'aanta, cunsuriyadda, jinsiga, iyo fasalka, iyo sidoo kale dadka taariikh ahaan la takooro inay helaan shaqo, daryeel caafimaad, iyo guryo la awoodi karo. . Waxay u matalaysa Qabiilka Duwamish ee TEW, halkaas oo ay rajaynayso inay wax ka barato oo ay u doodo Duwamish iyo dhammaan Qabiilada/Dadka asaliga ah.
Amir Noir Soulkin waa Agaasimaha Isgaarsiinta iyo Horumarinta ee Adeegyada Bulshada Bariga Afrika (EACS), waa 21-jir Madow ah hogaamiya una adeega hay'ad aan faa'iido doonka ahayn oo ay asaaseen leeyihiina qaxootiga Bariga Afrika iyo qoysaska soogalootiga ah ee ku nool degmada King. Isagu waa xidhiidhka aasaasiga ah ee isgaadhsiinta ee ururka, waxaanu kormeeraa qaybta lacag ururinta iyo horumarinta ee ururka. EACS Seattle waxay ku taal aagga New Holly, oo ah bulsho BIPOC ah oo xad dhaaf ah u adeegta in ka badan 350 dhallinyaro ah sannad kasta iyada oo u maraysa dhaqan sal leh ee Pre-K ilaa fasalka 12aad ee dugsiga ka dib, xagaaga, iyo dhexgalka iyo barnaamijyada la-talinta dhalinyarada ee kor u qaada codka qaxootiga iyo soogalootiga Bariga Afrika qoysas
Amir waxa uu ka qalin jabiyay machadka hogaaminta bulshada ee Puget Sound Sage halkaas oo uu ka kasbaday wacyigalin balaadhan oo ku saabsan xidhiidhka ka dhexeeya dhaqdhaqaaqa fasalka iyo helitaanka gaadiid badbaado leh, la awoodi karo oo siman, kaas oo isku xidha dhinac kasta oo nolosha ah. Soo-galootiga madowga ah ayaa inta badan looga tagaa wada-hadallada siyaasadda sababtoo ah luqadda iyo/ama caqabadaha gelitaanka, taas oo aad khatar ugu ah folx ku noolaanshaha bulshada lagu qaabeeyey ka-qaybgal dimoqraadi ah oo firfircoon. Amir waxa uu dareemayey in uu ka qayb qaadan karo shaqo sinnaan oo muhiim ah oo saamayn leh isaga oo ka wakiil ah qaxootiga Bariga Afrika iyo bulshooyinka soogalootiga ah isaga oo u adeegaya Kooxda Shaqaynta Sinaanta Gaadiidka: " Arrimaha matalaada. Wadajirka BIPOC waa muhiim. Nolosha dadka Madow Waa Muhiim. Codka dadka madow waa muhiim. Danaha dadka madow waa muhiim. Dhaqaalaha dadka madow waa muhiim. Tayada nolosha dadka madow waa muhiim.
Karia Wong waxa ay u adeegaysay soogalootiga tan iyo 1998-kii, markii ugu horaysay waxay ahayd iskaa wax u qabso haddana waa Isku-duwaha Xarunta Waxtarmada Qoyska ee CISC, Xarunta Macluumaadka iyo Adeegga Shiinaha. Mudadii 20+ sano ee ay ku jirtay taageerada soogalootiga, Karia waxay markhaati ka noqotay sida sinnaan la'aanta gaadiidku ay u noqotay caqabadaha soogalootiga si ay ula qabsadaan noloshooda cusub ee Seattle. Waxay aaminsan tahay in qof kastaa haysto fursad isku mid ah oo uu ku helo badqabka, la awoodi karo, la heli karo iyo ikhtiyaarrada gaadiidka deegaanka waara iyadoon loo eegin waddanka ay ka soo jeedaan, luqadda, asalka iyo awoodaha jireed / maskaxeed.
Xubnihii hore ee TEW
Sokunthea Ok (Waaxda Xaafadaha (DON), Xiriirka Bulshada )
Analia Bertoni (Waaxda Xaafadaha (DON), Xiriirka Bulshada)
Ma doonaysaa inaad ka qayb-gasho?
Codsiyada Sinnaanta Gaadiidka ee kooxda shaqada hadda waa la xidhay. Waad ku mahadsan tahay xiisahaaga! Fadlan dib nagala soo xiriir hadii fursado kale soo baxaan mustaqbalka.